एक जुझारु महिलाको विदाई
पूर्ण शोभा चित्रकार
जीवन र मरनको बारेमा कसले भविष्यबाणी गर्न सक्छ र ? कहिले जीवनमा अन्तिम बिश्राम लिनु पर्ने हो भन्ने बारेमा कसले जान्दछ र ? तर सत्य कुरा यहि हो, यो धर्तीमा जन्मेका जो सुकैले पनि अन्तिम बिदाईको लागि तयार हुनै पर्दछ । फरक यति मात्र हो कसैको विदाईमा मानिसहरुले गुण सम्झन्छन्, दुःख मान्छन्, बहभरी आँसु पोख्छन् । सावित्री बोहराको जीवनको अन्त्यको खबरले पनि उनीलाई चिन्ने र जान्ने जतिले उनको जीवन र जीवनसित जोडिएको संघर्षशील क्षणहरुलाई सम्झेकाछन् । हार्दिक श्रद्धान्जली सावित्री बोहरालाई ।
सावित्री बोहराको बुबा जगत बहादुर बोहरा विसं २०२६ सालतिरै कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पर्कमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको थियो । पारिवारिक कारणले सावित्रीको लागि राजनीतिक कुरा एकादेशको कथा बन्नु परेन । त्यसमाथि पनि उनी जन्मेको गाउँ जगतपुर लगायत धेरै गाउँहरु सामन्ती शोषणको दबदबामा परेका थिए । नेपाली टेलि श्रृखला ʻअविरल बगिरहेछ ईन्द्रावती’ मा जस्तै । पंचायतको जय र राजारानीको जय भन्नु बाहेक राजनीतिक स्वतन्त्रताको उज्यालो ती गाउँहरुमा पुगेको थिएन । महिलाहरुमा स्वतन्त्रता थिएन । घास दाउरा र चुला चौका नै उनीहरुको जीवनको मुख्य जिम्मेवारी थियो ।
विसं २०३३ साल चैत्र १२ गते झापा विद्रोहका केहि क्रान्तिकारीहरु र २०३२ सालको पर्चा काण्ड पछि जेल परेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले ललितपुरको नख्खुजेल ब्रेक गरेपछि केहि राजनीतिक बन्दीहरु जेलबाट भाग्न सफल भए । भागेका ती राजबन्दीहरुलाई बाहिर बसेका साथीहरुले सुरक्षा दिए । चन्द्र प्रकाश मैनालीलाई काठमाडौंमा र वीर बहादूर लामा मार्फत केहिलाई मकवानपुरको फाखेलमा, प्रदिप नेपाललाई लुम्बिनीमा व्यवस्थापन गरिएको थियो भने कोहि भारतमा पुगेका थिए । अमृत कुमार बोहराको माध्यमबाट माधव पौडेललाई सिन्धुपाल्चोक लगे पछि ०३३ । ०३४ सालतिर सिन्धुपाल्चोकको पिस्करमा सेल्टरको व्यवस्था गरेका थिए । पार्टीको जिम्मेवारीको सिलसिलामा विसं २०३४।२०३५ साल तिर देखि सावित्रीको पार्टी सम्पर्क माधव पौडेल मार्फत भएको थियो । पारिवारिक कारणले राजनीतिका कुरा केहि न केहि रुपले बुझेकी सावित्रीले अव विस्तारै पार्टी कामको जिम्मा पनि लिन थालिन् ।
पार्टी काम गर्न पनि शिक्षाको ठूलो महत्व थियो । विसं २०३८ सालमा माधव पौडेलको सल्लाहमा छब्बिस, सत्ताईस बर्षको उमेरमा उनी बारबेसीको सुनकोशी माध्यामिक बिद्यालयमा आठ कक्षामा भरना भईन् । आठ कक्षामा भरना त भयो, तर उनले राम्रोसंग कख र कका पनि लेख्न सकेकी थिईनन् । तर उनले हिम्मत हारिनन्, खुब मेहनत गरीन् ।
पढाईको साथ साथै उनले राजनीतिक जीवनलाई पनि सक्रिय पारिन् र जिल्लाको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको जिल्ला कमिटीको सदस्य पनि भईन् । विसं ०३५÷०३६ को आन्दोलन पछि देशमा बहुदल कि निर्दल भन्ने विषयमा जनमत संग्रहको घोषणा भए पछि देशका विभिन्न स्थानहरुमा खुला राजनीतिक गतिविधिहरु संचालन भए । सिन्धुपाल्चोकका गाउँहरुले पनि राजनीतिक गतिविधिहरु अलि खुलेर अघि बढाउन थाले । विसं २०३७ सालमा अनेरास्ववियूको पहिलो सम्मेलनको आयोजना चौताराको कृष्ण मन्दिरमा भएको थियो । अर्धभूमिगत ढंगले गरेको विद्यार्थीहरुको त्यस सम्मेलनमा स्थानीय किसानहरु समेतको उपस्थिति थियो । सांस्कृतिक कार्यक्रम सहितको त्यो सम्मेलन भव्यतापूर्वक सफल भयो । तर चारैतिर प्रहरीहरुको ठूलो तैनाथले गाउँ र जिल्ला भरि आतंक फैलिएको थियो । सो कार्यक्रममा युवा विद्यार्थीहरुमा टंक कार्की, गौरी प्रधान, अरुण नेपाल, सरेश नेपाल लगायतका युवाहरुको नेतृत्व र सहभागिता रहेको थियो । त्यसको तीन बर्षपछि विसं २०४० सालमा अनेरास्ववियूको दोश्रो जिल्ला सम्मेलन शारदा माविमा आयोजना गरिएको थियो । तर यो पल्ट पहिलो सम्मेलन जतिको सुखद हुन पाएन । प्रहरीले प्रतिशोधमा तत्काल गोली चलायो । कैयौं घाईते भए । सम्मेलनस्थल भतांभुंग पार्नुका साथै कैयौंलाई पक्राउ गरे र कैयौंलाई वारेन्ट काटे । अनेरास्ववियूको अध्यक्ष टंक कार्की र कोषाध्यक्ष गौरी प्रधानलाई त्यहाँका पार्टीले स्थानिय जनताहरुको सहयोग र सुरक्षामा सुनकोशीको किनारै किनार हिँडाएर लामोसाँघुको एक सेल्टरमा पुर्यारे । गोली लागेको एकजना किसानलाई पनि त्यहि सेल्टरमा पुर्याईयो ।
त्यो घटनाको लगत्तैपछि माघ १ गते माघेसंक्रान्ति मनाउन किसानहरु पिस्करमा भेला भए । सांस्कृतिक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको थियो । हरेक गतिविधिलाई राजनीति मात्र देख्ने बानी लागेको पंचायती सरकारले त्यो कार्यक्रममाथि निर्मम दमन गर्ने योजना बनायो र गर्यो । पिस्करमा भेला भएका किसानहरुमाथि गोलीको बर्षा भयो । ईली थामी र विर बहादूर थामी घटनास्थलमै मृत्यु भयो । सावित्रीको बुबा जगत बहादुर बोहराको हात गोलीले तीन टुक्रा भयो । पाल्कमाया थामी र साङडोल्मा लामालाई पनि गोली लागेको थियो । प्रहरीले गोली लागेका नौ जना र सोना तामाङ, राजु थामी, मेघनाथ पौडेल, छत्र बहादूर बोहरा, मान बहादूर थामी, सावित्री बोहरा लगायत दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरे । त्यसै घटनामा पक्राउ परेकी सावित्री पाँच बर्ष सम्म जेल बस्नु पर्यो । जेलबाटै उनले एस.एल.सी परिक्षा पास गरीन् । उनीले सँधै बुबाको राजनीतिक आचरणलाई अनुसरण गरीन्, आमा सयोग गरीन्, बहिनी शुशिला, भाई कृष्ण र रमेशलाई हौसला दिईन् । उनले जोसंग जुन बेला काम गरीन् उनीहरुसंग आपूmलाई एक जुझारु, बिद्रोही, लडाकु, सक्रिय, मेहनती महिलाको रुपमा परिचय छोडिन् ।
सावित्रीको जीवनको यात्रा यति मै मात्र सीमित भएन । पढाईमा अव्बल बनेकी उनीले स्टाफ नर्स पास गरिन् र विरामीहरुको स्यायार तनमनले गर्न थालिन् । उनको विहे अछामका युवा भैरब रावलसंग भयो । तर समय कसको नियन्त्रणमा छ र ? उनी विस्तारै डाईबेटिज, किड्नी, कलेजोको बिरामीबाट गल्दै गईन् । त्यसमाथि कोरोना १९ को बोझ पनि थप्न पुग्यो र उनीले संसारबाट विदा लिईन् । हार्दिक श्रद्धान्जली ।